China High quality Industrial Robotic Arm na-eji Slew Drive factory na emepụta |Wanda
Ogwe aka Robotic Industrial dị elu na-eji Slew Drive
Slew Drive na-ewepụta arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na enweghị nrụzi na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.Enwere ike iji ya na ogwe aka Robotic.Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na ígwè ọrụ mmepụta ihe na-eji slewing draịva na-arụ ọrụ ike ma na-achịkwa torque ntụgharị.Ngwa igwe na igwe rọbọt na-adabere na draịva na-egbu egbu maka idobe izi ezi na ịrụ ọrụ na-agbanwe agbanwe.
Slew Drive na-ewepụta arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na enweghị nrụzi na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.Enwere ike iji ya na ogwe aka Robotic.Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na iji ígwè ọrụ mmepụta iheịkwọ ụgbọalas iji mee ka mmegharị ike na njikwa torque ntụgharị.Ngwa igwe na igwe rọbọt dabere naịkwọ ụgbọalas maka idobe izi ezi na arụmọrụ na-agbanwe agbanwe.
ROboteicogwe akabụ ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ nke nwere nkwonkwo nwere ike ịgbagọ ma tụgharịa.Igwe ọkụ eletrik nke kọmputa na-eji na-eduzi ha.Enwere ike itinye ngwaọrụ na njedebe 'aka' nke ogwe aka, na kọmpụta haziri iji mee ka ha rụọ ọrụ dị iche iche, dị ka igbutu, olulu mmiri, ịgbado ọkụ, na eserese.A na-ejikwa ha arụ ọrụ dị ize ndụ dị ka ijikwa ihe redioaktivu ma ọ bụ bọmbụ na-agbawabeghị.
Site n'ichepụta usoro nha nha agbagọ, WEA Slewing Drive nwere ike mgbochi ike ọgwụgwụ na ike njikọta, nke dabara maka ọrụ dị arọ, ngwa ngwa ngwa, ọ dabara maka ngwa Robotic Arm.
Ị nwere ike ịhụ katalọgụ maka WEA Slewing mbanye.
Ụgbọ ala na-egbu egbu bụ igbe igbe nke nwere ike ijide ibu radial na axial n'enweghị nsogbu, yana ịnyefe ike maka ntụgharị.Ntughari nwere ike ịbụ n'otu axis, ma ọ bụ n'ọtụtụ axes ọnụ.A na-eme draịva slewing site n'ichepụta gearing, bearings, akàrà, ụlọ, moto na ihe enyemaka ndị ọzọ ma na-achịkọta ha n'ime igbe gia emechara.
Mbanye slewing na-eji nkenke kinematics na-enye oke nha nke nhazi otu ọkwa.A na-agbakọta bearings na gears n'ime obere akpa nke nwere onwe yana njikere ịwụnye iji kwalite ibu na arụmọrụ.Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Xuzhou Wanda slewing bearing Co., Ltddị ka onye nwere ahụmahụgburu ụgbọalaemeputa, anyị nwere ike na-enye elu àgwà igbu draịva.
Nke gara aga: nnukwu dayameta anọ kọntaktị bọl turntable bear maka robot
Osote: otu ahịrị bọọlụ turntable na-ebu mgbanaka na-ebu na ngwa mpụga
WEA Series gburu mbanye
WEA14 Ụdị igbu egbu egbu maka alụlụ ọgụ ...